တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ၁-ရက် ၁-လ ဒိုင်ယာရီ
Posted by မေဓာဝီ at 10:42 PM
သူများတွေက နိုင်ငံခြားရောက်ရင် အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်ကောင်းတယ် ထင်နေကြတာ။ မမေ အဆောင်မှာ ၀ိုင်ဖိုင် မပေးထားဘူးလား။ မမေရေ ကမ္ဘာကြီး ပူနေပြီ၊ ပုံမှန် ခုလောက်ဆို ကလေးတွေ နှင်းလူတွေ လုပ်ပြီး ဆော့နေကြတာ၊ အခု ကောက်စရာ နှင်းတောင် မရှိ။ အာရှမှာ နှင်းသွားကျပြီး ဒီဘက်မှာ ပူလာရင်တော့ ၊ ဥရောပ လူဦးရေ များဦးမယ်။ ဟက်ဟက် မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ
Hi, Welcome from UK. Which Uni are you studying now? I am so proud that UK have many good blog writers such as u, 99, ko htike and etc...
Wish you to have successful year in here. CNL!
iron birdge က တကယ့်အိပ်မက်ထဲကတံတားလေးပဲနော်...(btw...မေ့ဦးရီးတော်ကို အပြင်မှာတကယ်ပဲ အဲဒီလိုခေါ်လားဟင်...ခေါ်ပုံလေးကထူးဆန်းလို့ပါ)
1/04/2008 1:43 AM
ကွန်နက်ရှင် မကောင်းဘူးဆိုတာက ဦးရီးတော်အိမ်မှာ ဒိုင်းလ်အပ်နဲ့ သုံးနေရလို့ပါ။ ကျောင်းမှာကတော့ သိပ်မဆိုးလှပါဘူး။ မင်းမင်းလည်း နှင်းကို တ-လိုက်ရတာ … အခုရော နှင်းကျပြီလား။
ကို CNL ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် … ။
မခိုင်ရေ … တကယ်တော့ အပြင်မှာ ဦးရီးတော်လို့ မခေါ်ပါဘူး။ စာထဲမှာမို့ ခေါ်ကြည့်တာ။ ဟဲဟဲ .. :P
1/04/2008 6:11 PM